Marché local. En effet, cette société utilise annuellement comme matières premières, tonnes de cacao. Antsa R. La crainte pour leur image et leur honneur sont parmi les arguments mis en avant. À contre courant.
Ny fanamarihana eo amin ny lafiny havia dia manoro hevitra ny amin ny fomba fampianarana, ary ny vatan ny lesona dia mampiseho ireo fanazavana izay hampianarina. Avy amin ireo fanazavana izay nomena, dia fanteno ireo fitaovana sy fomba tena tsara izay mifanaraka amin ny ilain ny zatovovavinao ao anatin ny fotoana izay ananana. Raha ilaina dia azo alavaina mihoatra ny fotoam-pampianarana iray ny lesona. Ny vatan ny lesona dia ahitana ireto manaraka ireto: a.
Ity no fomba atolotra hanombohana ny lesona sy mba hisintonana ny saina sy ny fahalianan ny mpianatra. Ny fizarana tsirairay ao amin ny lesona dia ahitana ireo hevi-dehibe. Ampianaro ny fizarana tsirairay amin ny alalan ny fampiasana ny soratra masina, tantara, teny nindramina, ary ireo fampiasana nomena.
Io no manome ny famintinana ny lesona, ary manoro hevitra ny amin ny fizarana ny fihetseham-po momba ny fitsipiky ny filazantsara nohadihadina sy ny fijoroana ho vavolombelona momba ilay fitsipika. Fampiharana ny Lesona. Io dia manome soso-kevitra momba ny tetik asa, andraikitra, na tanjona hanampy ny zatovovavy tsirairay hampihatra izay fitsipika nohadihadina eo amin ny fiainany.
Raha azo atao, dia afaka manome fotoana ianao amin ny fanombohan ny fotoan-dakilasy manaraka mba hizaran ny zatovovavy ny traikefany. Afaka milaza ianao hoe: Tamin ny herinandro lasa dia niresaka momba ny isika. Nanandrana izany ve ianao? Ahoana ny fihetseham-ponao momba izany? Raha tsy mamaly ireo zatovovavy amin ny voalohany, dia afaka milaza ianao hoe: Nanandrana izany aho, ary izao ny zava-niainako.
Amin ny alalan ny fizarana ny zavatra tsara niainanao, dia afaka manampy ny zatovovavy ianao hianatra izay fomba hampiharana ireo fitsipika ireo eo amin ny fiainany. Soso-kevitra amin ny fampiasana. Ireo dia fampiasana mifandray izay azo omanina mba hampitomboana sy hanamafisana ny fitsipiky ny filazantsara Ny tantara sy ohatra omena ao amin ny lesona dia natao hanampiana ny zatovovavy mba hahafantarany ny fomba hampiharana ireo fitsipiky ny filazantsara nampianarina eo amin ny fiainany andavanandro.
Rehefa nitondra am-bavaka ny fanomananao sy fanoloranao ny lesonao ianao dia mety hahatsiaro ho voasarika hanolo ireo tantara sy ohatra amin izay niseho taminao manokana na avy amin ny loharano azo antoka iray hafa izay mahazatra kokoa ny zatovovavy ampianarinao.
Rehefa manao izany, dia ataovy ao an-tsaina lalandava ny fitsipiky ny filazantsara nampianarina ao amin ny lesona. Ny fanampin-tantara dia tokony hanohana sy hanampy ny fampianarana ny fitsipiky ny filazantsara izay nasongadina ao amin ny tanjon ny lesona. Tsy voatery hampianarina araka ny firafitra hita ao amin ny boky fampianarana ny lesona, nefa kosa ny foto-kevitra rehetra dia tokony ho voakasika amin ny fotoana mahamety izany mandritra ny taona.
Mivavaha mba hahazoana aingam-panahy mba hanampy azy ireo hahatratra ny fahaizany feno amin ny maha-zanakavavin Andriamanitra azy. Ny fampianarana mahomby dia ahitana ny fahafantarana ny zatovovavy tsirairay avy, ny ray aman-dreniny ary ny fianakaviany. Eritrereto ny momba ny zatovovavy tsirairay sy ny fianakaviany. Miezaha hijery azy araka ny fijerin ny Ray any an-danitra azy. Raiso araka ny fari-pahaizany ny tsirairay, ary ampio izy mba hisondrotra ao amin ny filazantsara.
Ianaro ny momba ny zatovovavy tsirairay amin ny alalan ny fanomezanao ireto fanontaniana manaraka ireto amin ny tenanao: Inona ny zavatra mahaliana azy, ny faniriany, ny talentany, ary ny tanjony?
Ahoana ny mombamomba azy sy ny miseho aminy any an-trano? Inona no ilainy? Ahoana no ahafahako manampy azy? Ny fomba tsara indrindra hanampiana ny zatovovavy tsirairay dia ny fanampiana azy hianatra sy hiaina ny filazantsara. Ny Filoha Marion G. Romney dia nanoro hevitra hoe: Ny fianarana ny filazantsara avy amin ny teny voasoratra dia tsy ampy. Tsy maintsy iainana ihany koa izany.
Raha ny tena marina, dia mifampiankina ny fahazoana fahalalana momba ny filazantsara sy ny fiainana izany. Mifandray izy ireo. Tsy afaka ny hianatra tanteraka ny filazantsara ny olona iray raha tsy miaina izany. Mitohy tsy hanam-pahataperana io hodina io. Izany no drafitra mba hahafahan ny olona iray misondrotra ho amin ny fahalalana feno ny filazantsara.
Records of Great Worth, Ensign, Sept. Rehefa nitsidika ny Nefita Izy taorian ny nitsanganany tamin ny maty dia nilaza hoe: vii 9 Moa va ianareo manana ireo izay marary eo anivonareo? Ento at ireo. Moa va ianareo manana izay malemy, na jamba, na mandringa, na kilemaina, na boka, na izay maina, na izay marenina, na izay ory na manao ahoana na manao ahoana izany?
Ento at izy dia hositraniko, fa manana fangorahana anareo Aho; ny kiboko dia feno famindram-po. Na dia tsy voahofana hanome torohevitry ny manampahaizana aza ianao, amin ny maha-mpampianatra, dia afaka mampiseho firaikana sy fifankahazoana amin ireo olona sembana tsirairay avy ianao. Azonao ampandraisina anjara araka izay azo atao ny mpianatra tsirairay mandritra ny fampianarana.
Ireo mpianatra izay sembana dia mety hanana fahasahiranana eo amin ny fomba fianarana, fahalemena ara-tsaina, olana eo amin ny fomba fiteny, tsy fahitana na tsy fahenoana, olana eo amin ny fomba fitondrantena sy ara-tsosialy, aretina ara-tsaina, olana eo amin ny fomba fihetsehana na tsy fihetsehana, na fahasimban ny fahasalamana izay maharitra ela.
Mety ho sarotra sy tsy mahazatra ny sasany ny fomba fiteny sy ny fomba fihetsika.
Chocolaterie Robert : Une nouvelle gamme de produits
Na dia eo aza ny zava-mitranga toy izany eo amin ny olona iray, ny mpianatra tsirairay dia mila tiavina sy raisina hianatra ny filazantsara ary handray anjara tanteraka, ka hanompo ny hafa.
Ampiasao ireto soso-kevitra manaraka ireto rehefa mampianatra sembana ianao: Aza jerena ny fahasembanana ary miezaha hahafantatra ilay olona.
Mijoroa amin ny maha-izy anao, sariaka sy tsara fanahy. Fantaro ny lafiny mampatanjaka ilay olona sy ny mahaosa azy. Ampianaro ny mpianatra ny andraikitr izy ireo hanaja ny mpianatra hafa. Ny fanampiana olona sembana dia zavatra iainan ny kristiana, izay fianarana ho an ny mpianatra rehetra.
Tadiavo izay fomba tena tsara hampianarana ny mpianatra amin ny alalan ny firesahana amin ny ray aman-dreny, olona hafa ao amin ny fianakaviana, ary raha azo atao dia amin ilay mpianatra mihitsy. Alohan ny hangatahana ireo mpianatra sembana hamaky teny, hivavaka, na handray anjara, dia anontanio azy ireo izay fihetseham-pony amin ny fandraisana anjara ao an-dakilasy.
Asongadino ny fahaizana sy ny talentan ny olona tsirairay, ary tadiavo izay fomba ahafahan ny tsirairay mandray anjara malalaka sy amim-pahombiazana. Ampifanaraho amin izay ilain ireo mpianatra sembana ny fitaovana ampiasaina amin ny lesona sy ny zavatra manodidina.
Sary 1, Ny Fahitana Voalohany , hita any amin ny faran ny boky fampianarana. Isafidianana: Manomàna peta-drindrina misy ireo toko sy andininy amin ny soratra masina sy ireo toetra voalaza ao amin ny ampahany faharoa ao amin ny lesona.
Manendre zatovovavy mba hanolotra ireo tantara, soratra masina, na teny nindramina izay nofidinao. Tantara Nisy zavatra vitsivitsy izay tsy niova mihitsy teo amin ny fiainana miovaova hatrany nananan i Ev, zazalahy izay notaizana tao Georgia tamin ny taona tany ho any. Na izany aza anefa, ny toe-javatra iray izay azony antoka isan-kerinandro dia ny fanangonan ny reniny hatrany ny fianakaviany misy olona maro ary ny fitondrany azy ireo any am-piangonana.
Mpitandrina ny rain i Ev. Raha vao efatra ambin ny folo taona teo ho eo i Ev dia nanomboka nanontany momba ireo fampianarana sasany ao amin ny fiangonany. Ny nampisafotofoto azy indrindra dia ny momba ny famaritan ny fiangonany an Andriamanitra. Sarotra taminy ny naka sary an-tsaina an Andriamanitra tsy manana vatana, ratsam-batana, na filana, izay mety ho eny rehetra eny amin ny fotoana iray ary tsy tena fantatra hoe aiza na aiza.
Nahalala bebe kokoa an i Jesoa izy satria efa nahita ny sariny ary efa namaky tantara ao amin ny Baiboly momba ny asa fanompoany tet an-tany. Nanjary nihasarotra tamin i Ev ny fandehanana tany am-piangonana, na dia tiany aza ny nihira tao amin ny antokom-pihira. Fa ny tena zava-dehibe, dia nanjary nihasarotra taminy ny nivavaka tamin ity Andriamanitra feno misitery ity. Tamin ny farany dia tsapany fa nihanalavitra ny fanabeazana ara-panahy azony ny fiainany.
Taona vitsivitsy tat aoriana, dia nifanena tamin ny misiônera Olomasin ny Andro Farany roa izy tany am-piasanany. Nipololotra tao am-pony ny fahatsiarovana ny fiainana ara-pinoana nananany teo aloha, ary dia nangataka ireo misiônera ho any an-tranony izy hampianatra azy.
Rehefa nanolotra ny tantaran i Joseph Smith ny misiônera, dia tsy nahataitra an i Ev ny nahafantatra ny fisafotofotoana nananan i Joseph momba izay fiangonana hirotsahany ho mpikambana, satria tsaroany ny fihetseham-pony fony izy zatovolahy. Sary Asehoy ny sarin ny Fahitana Voalohany Naverin ireo misiônera notantaraina ny tantaran ny fahitana voalohan i Joseph Smith, ary nolazainy tamin i Ev ny nisehoan ny Ray sy ny Zanaka tamin ny maha-olon-droa miavaka feno voninahitra Azy ireo.
Nahatsapa ny fahamarinan ilay fahitana i Ev, ary feno hafanana mahafinaritra ny fony. Dia natao batisa izy.
Regarde ça: TÉLÉCHARGER MSN7 0 GRATUIT
Tamin ny alalan ny fahafantarana fa Andriamanitra no Rainy any an- danitra, ary izy dia tena zanaka ara-panahin Andriamanitra, dia nanjary afaka nahita tanjona lehibe teo amin ny fiainany i Ev. Inona no nosintonin i Ev avy amin ny tantaran ny fahitana voalohan i Joseph Smith?
Nahoana no nanohina ny fony tanteraka io tantara io? Inona no nianarantsika momba ny tena toetran Andriamanitra?
Jereo tsara raha takatry ny zatovovavy fa amin ny alalan ny tenivavolombelon ny mpaminany sy ny soratra masina ary ny fanambarana manokana no ahafantarantsika ny toetran Andriamanitra. Lazao ny zatovovavy fa notantarain i Joseph Smith ny zava-niainany niaraka tamin ny Ray sy ny Zanaka. Asaovy mamaky mafy ny Tantaran i Joseph Smith ary ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 24 ny zatovovavy.
Hazavao fa ny anaran Andriamanitra Ray dia i Elohima, ary Izy no rain ny fanahin ny olombelona rehetra. Izy ihany koa no rain i Jesoa Kristy ara-nofo.
Vakio ity fanambarana manaraka avy amin ny Fiadidiana Voalohany ity: Andriamanitra Ray Mandrakizay izay lazaintsika amin ny anarana voasandratra hoe Elohima, no tena Rain ny Tompo sy Mpamonjy antsika Jesoa Kristy, sy ny an ny fanahin ny olombelona rehetra.
Hazavao fa Andriamanitra Ray dia niseho sy niresaka tamin ny mpaminany tet an-tany tamin ny toe-javatra mahalam-piseho. Raha nanao izany Izy dia mba ho fijoroana ho vavolombelona ny amin ny fahefana masin i Jesoa Kristy Zanany fotsiny ihany.
Oviana no nijoro ho vavolombelona ho an ny Zanany ny Ray? Tamin ny fahitana voalohan i Joseph Smith, tamin ny nanaovana batisa an i Kristy, tamin i Kristy niova endrika teo anoloan ny Apôstôliny, tamin i Kristy niseho tamin ireo Nefita taorian ny nitsanganany tamin ny maty. Hazavao fa nilaza i Joseph Smith fa tokony hahalala ny momba ny toetran Andriamanitra Ray izay lazaina manaraka isika. Rehefa mamaky ireo hevitra enina ianao, dia soraty eny amin ny solaitrabe ireto teny ireto: 1.
Mandrakizay, 2. Be famindram-po, 3. Tsy miova, 4. Marina, 5. Tsy mizaha tavan olona, 6. Be fitiavana. Voalohany, dia Izy no Andriamanitra talohan ny namoronana ny tany, ary dia mbola io Andriamanitra io ihany taorian ny namoronana izany Faharoa, dia be famindram-po sy be fahasoavana Izy, tsy mora tezitra, feno hatsarana, ary toy izany Izy hatramin izay, ary mbola ho toy izany mandrakizay.
Fahatelo, dia tsy miova Izy, na dia misy fiovaovana aza eo Aminy; fa Izy ilay tsy miova hatramin izay ka ho mandrakizay, ilay tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay; ary ny lalany dia faribolana mandrakizay tsy miova.
Fahefatra, dia Andriamanitry ny fahamarinana Izy ary tsy mandainga. Fahadimy, dia tsy mizaha tavan olona Izy; fa ireo izay matahotra an Andriamanitra sy miasa amim-pahamarinana ao amin ny firenena rehetra dia hankasitrahany. Fahenina, dia fitiavana Izy Lectures on faith, nangonin i N. Lundwall [Salt Lake City: N. Lundwall, n.
Soraty eo amin ny lafiny iray amin ny solaitrabe ireto toko sy andininy ao amin ny soratra masina manaraka ireto, ary ny sasany amin ireo toetran Andriamanitra eo andaniny. Na asehoy ny peta-drindrina izay efa nomaninao. Asaovy tadiavin ny zatovovavy ilay soratra masina ka hovakiny mafy izany. Asaovy manoritra tsipika izy ireo hampifandray ny toetra marina izay mifanaraka amin ilay toko sy andininy ao amin ny soratra masina.
Tia antsika Izy. Manana vatana nofo sy taolana Izy. Tsy miova Izy. Mitoetra any an-danitra Izy. Teny nindramina Fanadihadiana Famakafakana soratra masina Zanaka sady Mpandova ny Raintsika any an-danitra Isika Hazavao fa ny mpaminanintsika amin ny andro farany dia nampianatra fa zanaka ara-panahin ny Ray any an-danitra ara-bakiteny isika.
Asaovy vakina izao teny nindramina manaraka izao: Isika izay mety maty dia tena zanaka fanahin Andriamanitra ara-bakiteny tokoa. Raha nahafantatra, nino, ary nanaiky ity fahamarinana ity sy niaina izany ny olona, dia ho niova endrika sy voavotra ity fiarahamonintsika marary sy efa ho faty ity, ary hanana fiadanana ny olona ankehitriny, ary fifaliana mandrakizay amin ny hoavy Marion G.
Romney, tao amin ny Conference Report, Apr. Entano ny zatovovavy hieritreritra fomba manokana izay hitondra vokany eo amin ny fiainany ny fahalalany fa zanak Andriamanitra izy ireo.
Azonao atao, raha tianao, ny manome ireto fanontaniana manaraka izao ireto: Nahoana ny fahalalana fa zanak Andriamanitra ianao no misy akony eo amin ny fitondranao ny tenanao? Nahoana io fahalalana io no mitondra akony eo amin ny fomba fitondranao ny olona ao amin ny fianakavianao sy ny namanao? Ahoana no mety ho fiainanao raha tsy nahalala ianao fa manana Ray any an-danitra izay azonao ivavahana?
Hazavao fa ireo andininy ireo dia mampianatra fa zanak Andriamanitra isika ary mpandova Azy. Afaka mandova ny fiainana mandrakizay isika, izay karazam-piainana iainan Andriamanitra. Hamela antsika hizara ny fahalalana sy voninahitra mitovy amin izay ananany Andriamanitra. Nanome fepetra izay tsy maintsy tratrarintsika anefa Andriamanitra, raha te handova ny fiainana mandrakizay isika. Aiza no ahafahantsika mahita ireo fepetra izay tsy maintsy tratrantsika ireo?
Ao amin ny soratra masina, fampianaran ny mpaminany amin izao andro izao, fampianaran ny ray aman-drenintsika, fivoriantsika any am-piangonana.
Hazavao fa ireo fepetra ireo dia ny didy izay nomen Andriamanitra antsika.
Ireo didy ireo dia manoro antsika ny lalana mba hahasambatra araka izay azo atao amin izao fiainana izao, ary mba handovana ny fiainana mandrakizay amin ny fiainana hoavy. Ampio ny zatovovavy hahafantatra fa tsy misy zavatra lehibe kokoa na tsara kokoa noho ny karazam-piainana izay iainan Andriamanitra.
Tsy azontsika an-tsaina akory ny hafaliana entin izany fiainana izany sy ny hatsarany. Ny fitandremana ny didy no tambin ny ezaka rehetra izay takian izany, satria amin ny fanaovana izany ihany no hahatonga antsika ho tahaka ny Raintsika ary handova ny fiainana mandrakizay.
02 DEPUTE VOAHANGY
Ny fomba iray tena tsara izay ahafahantsika mianatra momba ny Raintsika any an-danitra dia amin ny alalan ny fianarana momba ny Zanany Jesoa Kristy. Mba hanampiana ny zatovovavy hahafantatra ny antony ahafahantsika mianatra momba ny Ray amin ny alalan ny fianarana ny momba an i Jesoa Kristy, dia atolory ireto torohevitra manaraka ireto: 1. Ny Ray any an-danitra sy i Jesoa Kristy dia iray.
Amin ny fomba ahoana no maha-iray an Andriamanitra sy i Jesoa Kristy? Ataovy azo antoka ny fahafantaran ny zatovovavy fa ny Ray sy ny Zanaka dia iray fieritreretana, iray tarigetra, ary iray tanjona.
Olona miavaka izy ireo, ary satria tena mitovy eritreritra sy atao izy ireo, ilay iray hafa dia afaka miteny eo amin ny toeran ny iray. Afaka mianatra momba ny zavatra nolazaina sy nataon i Kristy isika, ary afaka mahafantatra fa ny Ray dia nilaza sy nanao ireo zavatra ireo ihany koa.
Jereo Jaona Indraindray ny zatovovavy dia manontany tena hoe oviana no i Jesoa Kristy no miteny ao amin ny soratra masina, ary oviana no ny Ray no miteny. Ny teny nindramina manaraka dia hanampy hamaliana izany fanontaniana izany.
Mampiseho antsika fitiavana mandrakizay i Jesoa amin izay zavatra rehetra ataony. Mitovy amin izany koa ny fitiavan ny Ray any an-danitra antsika. Rehefa mamaky momba ireo asam-pitiavana lehibe izay nasehon i Jesoa tamin ny Jiosy sy ny Nefita isika dia afaka mahafantatra fa tia antsika tahaka izany fitiavana tonga lafatra izany koa ny Ray.
I Kristy dia nampianatra ny fitiavana lehibe izay ananan ny Ray amintsika. Asaovy vakin ny iray amin ireo zatovovavy ny Matio Hazavao fa tia antsika loatra ny Ray, ary tsy hanao zavatra izay tsy hahasoa antsika velively Izy.
Nanatanteraka ny drafitry ny famonjen ny Ray i Jesoa Kristy. Ny drafitry ny famonjena dia drafitry ny Ray. Natolony antsika izany tany amin ny fisiana talohan ny nahaterahana, ary nifidy ny Zanany Jesoa Kristy Izy mba hanatanteraka izany. Tonga tet an-tany i Kristy ary nampianatra antsika ny momba ny drafitry ny fibebahana sy ny fankatoavana ny didin Andriamanitra.
Rehefa izany, dia nijaly noho ny fahotantsika Izy ary nitsangana tamin ny maty mba hahafahantsika miverina any amin ny Ray raha mibebaka isika. Afaka mahafantatra isika fa hendry sy be fitiavana ny Ray any an-danitra rehefa fantatsika ny momba ny drafitry ny famonjena lehibe izay notanterahin i Jesoa Kristy. Mitovy sy manao tahaka izay ataon ny Ray Izy.
Jereo 3 Nefia 19 21; 2 Nefia Nasehon i Jesoa Kristy antsika tamin ny alalan ny ohatra ny lalana miverina any amin ny Ray. Jereo Jaona ; 2 Nefia Hira Famaranana Hazavao fa amin ny maha-zanakavavin Andriamanitra azy, ny zatovovavy tsirairay dia manana andraikitra mba hampitombo ny fahalalany momba ny toetran Andriamanitra.
Fampiharana ny lesona 1. Asaovy tadidian ny zatovovavy mandritra ny herinandro manaraka fa izy ireo dia zanak Andriamanitra, ary ny olona hafa dia anadahy sy rahavaviny. Asaovy raketiny ao amin ny diariny ny fomba nanovan izany fahalalana izany ny fomba fitondrantenany sy ny fitondrany ny hafa.
Sary 2, Jesoa eo am-baravarana , hita any amin ny faran ny boky fampianarana. Asehoy amin ny mpianatra ny sary. Asaovy mamboraka ny fihetseham-pony momba ny Mpamonjy sy ny fifandraisany Aminy ny zatovovavy iray.
Nisy lehilahy iray hafa teo alohany. Nisokatra ny varavarana, niditra ilay lehilahy, ary rehefa izany dia nikatona ilay varavarana. Afaka nandre ny fifampiresahana tao ambadiky ny varavarana ilay lehilahy tao ivelany.
Nanomboka ny tafa sy dinika: tiako holazainao amiko izay fantatrao momba an i Jesoa Kristy. Eny, naterak i Maria tao Betlehema Izy; niaina nandritra ny telo amby telopolo taona Izy ary nandany ny telo taona farany tamin ny fananganana ny fiangonany, ny fifidianana ny Apôstôliny ary ny fanomezana ny filazantsara hitarika ny fiainantsika.
Nanome antsika ôrdônansy manokana Izy mba ho famonjena sy ho fanandratana faratampony antsika. Nanajanona azy indray ilay mpanontany ary nilaza hoe: Marina avokoa izay nolazainao tamiko. Ary dia nasaina nivoaka ny efitrano ilay lehilahy. Rehefa lasa izy dia nisokatra ny varavarana ary niditra ilay lehilahy faharoa. Raha nanatona ilay mpanontany izy dia niankohaka teo Aminy sady nilaza hoe: Ry Tompoko, ry Andriamanitro.
Fanadihadiana Afaka mianatra ny hahafantatra an i Jesoa Kristy isika tsirairay Asaovy mandinika ny momba Azy ny zatovovavy tsirairay, ary Asaovy mamaly izao fanontaniana manaraka izao any an-tsainy. Omeo iray minitra fahanginana ny kilasy mba handinihany ny valin-teniny. Ampy ve ny fahalalanao momba ny Mpamonjy amin izao fotoana izao, ka ho fantatrao Izy raha mifanena aminy ianao?
Ataovy azo antoka tsara ny fahafantaran izy ireo fa tsy ilaina ny mahita ny Mpamonjy mba hahafahana mahalala Azy. Na dia nampanantena aza Izy fa hiseho amin ireo marina amin ny fomba sy fotoana izay tiany jereo Fotopampianarana sy Fanekempihavanana , dia nilaza tamin i Tomasy ihany koa Izy hoe: Sambatra izay tsy nahita, nefa nino Jaona Asehoy ny sarin i Jesoa eo am-baravarana.
Inona no zavatra hafahafa momba ity sary ity? Tsy misy fanintonam-baravarana avy ao ivelan ilay varavarana. Raha hiditra i Kristy dia inona no tsy maintsy mitranga? Tsy maintsy mamoha ny varavarana isika tsirairay.
Soraty eny amin ny solaitrabe ny 3 Nefia Asaovy mitady io soratra masina io ny zatovovavy tsirairay. Vakio sy hadihadio miaraka amin ny kilasy izany. Ampio ny kilasy hahita fa i Kristy mihitsy no nanasa antsika tsirairay mba hanatona Azy.
Raha nanatona aho mba hifankahalala Aminy, dia nitsangana Izy nanatona ahy ary nanatsotra ny tanany, ary nitsiky Izy raha nanonona moramora ny anarako.
En Chine, les autorités ont annoncé 42 nouveaux décès, portant le bilan de la maladie dans le pays à 2 morts et celui dans le monde à plus de 3 Les nouveaux cas signalés lundi en Chine continentale constituent toutefois le plus faible chiffre quotidien depuis fin janvier, un signe positif. Plus de précision: 24 Feb.
Traitement des dossiers. Toujours est-il que la lenteur dans le traitement des dossiers, à chaque niveau de la procédure, est encore un problème récurrent au niveau des différentes juridictions. Il ne reste plus donc que leur concrétisation.
Dominique R. Elle sera principalement destinée au marché local.